Uvimba weefayili weWebhusayithi, uLawulo lweShishini, uLuhlu lweeNcwadi eziSimahla zeWebhusayithi
Olu luhlu lwemibhalo yeshishini, apho ungangenisa iwebhusayithi yakho ukuyidwelisa phantsi kwecandelo okanye kwicandelo elingaphantsi. Esi sisikhokelo sodweliso lwasimahla lweWebhusayithi ekuvumela ukuba ungenise iwebhusayithi yakho neMifanekiso, iLogo, uLwazi, iMirhumo yeRSS,
njl.Uludwe lubandakanya zonke iintlobo zeshishini ezinokukhangelwa ngabantu kwaye yenye yeendlela ezilula nezisebenzayo zokufumana amandla abathengi kwishishini lakho.
Amacandelo kunye namacandelo amancinci
E F UG H
Mna UJ U-K
U-L M U-N
O Iphe Q
U V UW
Ulawulo lweWebhusayithi yeShishini ngokuthe ngqo lubhekisa kwishishini elinxulumene nokubonelela ngeenkonzo kunye nokuthengisa iimveliso. Oku kubandakanya iinkonzo zokulungisa iikhompyuter, iinkonzo zoyilo lwewebhusayithi, iinkonzo ze-SEO, iinkonzo zeemoto, izakhono zokufaka iikhowudi kulwimi, ababoneleli beenkonzo ze-SEM, njl
Le yinxalenye ebalulekileyo yentengiso kunye nokukhuthaza iwebhusayithi yakho. Ukuba yenye yeenjini eziphambili zokukhangela, uGoogle uthathwa njengeyona injini yokukhangela ukubonelela ngezona ziphumo zophando ezifanelekileyo kubakhenkethi. Ngaphandle kokulandela ialgorithm enobunzima bokumisela ubume bewebhusayithi, uGoogle ubonelela abanini bewebhusayithi ukuba benze imikhankaso yentengiso kuGoogle. Le yindlela yentengiso ekwi-Intanethi kwaye ibizwa ngokuba yintengiso ehlawulelweyo.
Kuluhlu lwethu lweshishini, uyakwazi ukufumana abacebisi abanokukunceda kwimikhankaso yentengiso kaGoogle, ngokuchola amagama aphambili kwaye ukhuthaze iwebhusayithi yakho ngeyona ndlela isebenzayo.
IBING yenye yeenjini eziphambili zokukhangela, ezixhaswa yiMicrosoft. Enye yezona injini zithandwa kakhulu kunye neewebhusayithi zihlala zenza inzame zokubeka phezulu kule injini yokukhangela.
Ngoku, njengoko sisazi ukuba zonke iinjini zokukhangela zilandela imigaqo ethile okanye ialgorithm yokubeka indawo kuyo nayiphi na iwebhusayithi, kubalulekile ukuba iwebhusayithi yakho izalisekise yonke. Sineengcali okanye amashishini adweliswe kulawulo lwethu olunokukunceda ukuba wenze indawo yakho kwiwebhusayithi kwaye uyenze ifaneleke kwiinjini zokukhangela kwaye ufumane indawo yakho ephezulu.
I-Wikipedia yindawo yasimahla ye-intanethi enikezela ngolwazi malunga nayo nayiphi na into. I-Wikipedia yenza iphepha elahlukileyo phantse kuyo yonke into onokuyikhangela. Ulwazi kumaphepha eWikipedia lwenziwe okanye luhlelwe ngamavolontiya kwihlabathi liphela.
Olu luhlu lwesikhombisi ayisiyo kuphela indawo yokungenisa iwebhusayithi yakho kwiindidi nakumacandelwana ukuze ufumane abathengi abanokubakho kwishishini lakho, kodwa unokufumana uluhlu lwamashishini kunye neengcali ezinokukunceda uphumelele ngokunjalo.
Ngenisa uluhlu lweWebhusayithi kulawulo
Ngenisa uluhlu lwewebhusayithi kudidi olufunwayo kunye nodidi olunemifanekiso, ulwazi ...